၁၉ နှစ်အရွယ် ဆယ်ကျော်သက်တစ်ယောက်က အာကာသယာဥ်မှုးတွေရဲ့ အသက်ကို ဘယ်လို ကယ်ဆယ်နိုင်တာလဲ? – Gniap
၁၉ နှစ်အရွယ် ဆယ်ကျော်သက်တစ်ယောက်က အာကာသယာဥ်မှုးတွေရဲ့ အသက်ကို ဘယ်လို ကယ်ဆယ်နိုင်တာလဲ?
သူမ နာမည်က ‘Amber Yang’ ။ အာကာသပတ်လမ်းကြောင်းရှိ အမှိုက်တွေရဲ့ လည်ပတ်မှုပုံစံကို ခန့်မှန်းနိုင်တဲ့ နည်းပညာကြောင့် ဆုပေါင်းများစွာ ရရှိထားခဲ့သူ။ သူမ အကြောင်း မပြောခင်မှာ ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းမှာ ရှိနေတဲ့ ဒီလို သေးငယ်လှတဲ့ အမှိုက် အတိုအစ ပြဿနာလေးတွေကနေ အာကာသစီမံကိန်းတွေရဲ့ ပြဿနာအကြီးကြီး ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အကြောင်းကို အရင် ပြောပြလိုပါတယ်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိတဲ့ Gravity ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားကို ကြည့်ရာကနေ Amber Yang အနေနဲ့ စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှု စဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ထိုစဥ်အချိန်က ၉ တန်းကျောင်းသူ အရွယ် ၊ ဖလော်ရီဒါမှာ နေထိုင်တဲ့ မိန်းကလေးတယောက်အနေနဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထဲက NASA အာကာသယာဥ် ပေါက်ကွဲမှု မှာ အသက်ဘေးက လွတ်မြောက်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ အာကာသယာဥ်မှုးဇာတ်ကောင်တွေ ပုံစံ ကို မျက်စိထဲ မြင်ယောင်နေခဲ့ပါလိမ့်မယ်။
No Merchandising. Editorial Use Only. No Book Cover Usage. Mandatory Credit: Photo by Warner Bros/Kobal/REX/Shutterstock (5885513ad) Sandra Bullock Gravity – 2013 Director: Alfonso Cuaron Warner Bros USA Scene Still
“Gravity” ဇာတ်ကားက ရူပဗေဒသဘောတချို့ကို ဆန့်ကျင်ကာ ရိုက်ကူးထားတယ်ဆိုပေမယ့် အဓိကကျောရိုးကတော့ Kessler syndrome လို့ ခေါ်တဲ့ သီအိုရီအရ စိုးရိမ်စရာကောင်းလှတဲ့ ဖြစ်ရပ်ဆန်း ဖြစ်နိုင်ခြေအပေါ် မူတည်ထားတာပါ။ ဒီသဘောတရားကတော့ ကမ္ဘာမြေပတ်လမ်းအတွင်းမှာ အရာဝတ္ထု ၂ ခု သာ ပွတ်တိုက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါက ပေါက်ကွဲနိုင်ချေများအားလုံး ရဲ့ ဆင့်ကဲ့ဖြစ်စဥ်များနဲ့ ကမ္ဘာမြေအပေါ် သက်ရောက်နိုင်မှု အပေါ် စိုးရိမ်နိုင်ဖွယ်များအားလုံး ကို ဆိုလိုပါတယ်။
ကျည်ဆန်အမြန်နှုန်းထက် ၁၀ ဆ ကျော် ပိုမြန်တဲ့ အရှိန်နဲ့ အာကာသတွင်း ရွေ့လျားနေတဲ့ အရာဝတ္ထု က လက်မဝက် အရွယ်အစားမျှ ဖြစ်နေပါစေ တိုက်မိတဲ့အရာအပေါ် ကြီးမားလှတဲ့ သက်ရောက်မှု ဖြစ်စေမှာပါ။ ဆိုလိုတာက တိုက်မိတာနဲ့ ဘယ်အရာမှ သက်ညှာမှု ရှိမယ်မထင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အာကာသအမှိုက်တွေ က အာကာသယာဥ်တစ်စီးကို ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းထဲသို့ လွှင့်တင်ရမှာ ဖြစ်လာနိုင်ချေရှိတဲ့ ဆိုးကျိုးအန္တရာယ်ကို တွက်ချက်ရာမှာ နံပါတ်(၃)အဆင့် အန္တရာယ်အရှိနိုင်ဆုံးအရာ ဖြစ်တယ်လို့ ဥရောပအာကာသအေဂျင်စီက ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် အာကာသတွင်း ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံနိုင်ချေများကို ရှောင်ရှားဖို့အတွက် ပုံမှန် စောင့်ကြည့်လေ့လာမှု နဲ့ တွက်ချက်မှုတွေ လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဌာန အာကာသ စောင့်ကြပ်မှု ကွန်ရက်အနေနဲ့ တရက်တာမှာ ဒေတာသိန်းနဲ့ချီတဲ့ လေ့လာမှုတွေကို ပြုလုပ်ရပါတယ်။
AFSPC ရဲ့ Chief of Operations ဖြစ်သူ Timothy Payne ပြောကြားချက်အရ – AFSPC အနေနဲ့ ထိခိုက်နိုင်ချေတွေကို ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့အတွက် NASA ကို အနာဂါတ်ဖြစ်နိုင်ချေ – ၁၀ ရက် စော၍ ကြိုတင်ခန့်မှန်းမှု ပေးရတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီခန့်မှန်းမှုတွေကို ဘယ်လို တွက်ချက်လဲဆိုတာတော့ မသိနိုင်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် Yang ကတော့ အရည်အသွေးပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ခန့်မှန်းမှုမျိုးကို Neural Network ပေါ်အခြေခံပီး တွက်ချက်နိုင်ခဲ့တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ “ကျွန်မ အထက်တန်းကျောင်းမှာ ရှိနေခဲ့စဥ်ကတည်းက ဒီအကြောင်းအရာပေါ် လေ့လာမှုတွေ လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်” လို့ သူမ က CNN သတင်းဌာန ကို ပြောပြပါတယ်။ လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ လမ်းကြောင်းရှာ နည်းလမ်းတွေမှာ မြေပြင်နဲ့ အာကာသစခန်းပေါ်ရှိ sensor တွေ ၊ radar တွေ ပေါ် အခြေခံပီး ခန့်မှန်းတွက်ချက်တာတွေ ပါပါတယ်။ Apollo ခေတ်ကတည်းက အသုံးပြုခဲ့တဲ့ သင်္ချာတွက်ချက်မှု Extended Kalman Filter လိုမျိုးကို အခုထိ သုံးနေကြတာလဲ ရှိတယ်လို့ သူမ က ဆိုပါတယ်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ Yang အနေနဲ့ Artificial Neural Network တွေဘက်ကို ပိုမိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ Pattern (ပုံစံ) တွေကို အခြေခံပီး လူ့ဦးနှောက်အလုပ်လုပ်ပုံတိုင်း လေ့လာတွက်ချက်တဲ့နည်းလမ်းပါ။ Yang အနေနဲ့ သူမ ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် Neural Network Tool တခုကို program ရေးသားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူမအနေနဲ့ အဆိုပါ Tool ထဲမှာ ရူပဗေဒအခြေခံ သီအိုရီတွေ နဲ့ Neural Network parameters တွေကို ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းခဲ့ရတာပါ။ ဒီနောက်မှာ သူမ က Public opensource – real-time dataset ထဲက အာကာသအမှိုက်တွေရဲ့ ကိုသြဒီနိတ် တွေကို ထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၆ ဇွန်လမှာတော့ Yang က သူမ ရဲ့ Neural Network အနေနဲ့ ၁၆ ရက်စာ ဒေတာတွေကို အခြေခံပီး အနာဂါတ်ကို ၃ ရက် ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တိကျမှုမှာတော့ ၉၈ ရာခိုင်နှုန်း ရှိခဲ့တယ် လို့ သူမ က ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီထက်ပိုကောင်းမွန်လာအောင် ပြုပြင်ပေးဖို့ လိုဦးမှာဖြစ်ပီး လိုအပ်ချက်ကတော့ ရှိနေပါသေးတယ်လို့ သူမက ကောက်ချက်ချပါတယ်။
Yang’s Software – Neural Network Analysis
Yang အနေနဲ့ သူမရဲ့ Project ကို ပြိုင်ပွဲပေါင်းများစွာမှာ မိတ်ဆက်ယှဥ်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ သူမက Regeneron Science Talent Search Program ရဲ့ finalist တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ပီး Intel Foundation-Young Scientist Award ကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းနှင့်အတူ ဒေါ်လာ ၅ သောင်းတန် scholarship ကို ရရှိခဲ့ပီး Stanford University မှာလဲ တက်ရောက်ခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ သူမ ရဲ့ TEDx Talk ပြောကြားချက်ကလဲ STEM နယ်ပယ်မှာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ရှုထောင့် နဲ့ အခက်အခဲတွေအကြောင်း နဲ့ သူမရဲ့အမြင် ကို ပြောင်မြောက်စွာ သရုပ်ဖော်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Forbes မဂ္ဂဇင်း ရဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ် 30 Under 30 : Youngest မှာလဲ ဖော်ပြခြင်း ခံခဲ့ရပီး White House Frontiers Conference တက်ရောက်ရန်လဲ ဖိတ်ကြားခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။
သူမ က လက်ရှိမှာတော့ Seer Tracking ဆိုတဲ့ startup ကုမ္မဏီတခုကို တည်ထောင်ထားပီး ရူပဗေဒကိုလဲ Stanford University မှာ အထူးပြုလေ့လာလျက် ရှိပါတယ်။
သူမ ရဲ့ TEDxTalk ပြောကြားချက်ထဲက စကားလုံးတချို့ နဲ့ နိဂုံးချုပ်ပါရစေ ။
“စာသင်ခန်းတခုထဲမှာ ယောက်ျားလေးတွေ အုပ်စုလိုက် ရှိနေပီး မိန်းကလေးတယောက်ထဲ ရှိတဲ့အခါမှာ လူတွေက သူမ စကားမပြောရဲတာကို ပြစ်တင်လှောင်ပြောင်ချင်ကြပါတယ်။ တကယ်လိုများ သူမ က စကားပြောလိုက်ရင် ကျန်တဲ့ သူတွေက လျှစ်လျှုရှုကြပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့များ သူမက ထင်မြင်ချက်တခုခု ပေးလိုက်ရင် ကျန်တဲ့သူတွေက သူမရဲ့ အကြံဥာဏ်က ထူးခြားမှုမရှိတဲ့ ခပ်တုံးတုံးအရာတခုအနေနဲ့ပဲ ငြင်းပယ်ကြပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် နောက်တကြိမ်များသာ သင့်ရဲ့ စာသင်ခန်း/ပတ်ဝန်းကျင် ထဲမှာ မိန်းကလေးတယောက်ထဲ ဖြစ်နေတာမျိုး ကြုံရင် သူမကို “ဒီစက်ရုပ်ကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်ကြမလဲ” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ သူမကိုလဲ မေးပေးပါ။ သူမရဲ့ သိပ္ပံ စိတ်ကူး အကြံဥာဏ်တွေကို လေးစားတန်ဖိုးထားပေးပါ။ “သင်္ချာ နဲ့ သိပ္ပံဘာသာရပ်တွေမှာ ယောင်္ကျားလေးတွေက ပိုတော်တယ်” ဆိုတဲ့ စကားကို သင်အနေနဲ့ မပြောခင်မှာ အရင် စဥ်းစားပါဦး ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူမ ကလဲ ကမ္ဘာကို ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ လူတယောက် ဖြစ်လာနိုင်လို့လေ”
Ref : https://edition.cnn.com/2018/01/15/health/amber-yang-tomorrows-hero/index.html
MakeCode 2020 Beta Version အကြောင်း
MakeCode ဆိုတာ …. MakeCode ဆိုတာကိုတော့ Micro:Bit အသုံးပြုသူတိုင်း သိပြီးဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်။ မသိသေးသူတွေအတွက် မိတ်ဆက် ပြောပြရမယ်ဆိုရင် MakeCode ဆိုတာက Microsoft က ထုတ်လုပ်တဲ့ online coding platform တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေအတွက် ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘာသာရပ်တွေကို အလွယ်တကူ သင်ကြားပေးနိုင်ဖို့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ Platform တစ်ခုပါ။ MakeCode က MicroBit လို controller တွေနဲ့ တွဲပီး Read more…
Data Journalism ဆိုတာ
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ မှာ Data Scientist / Data Analyst ဆိုတဲ့ အမည်တွေနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပေမယ့် Data Journalist / Data Journalism ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့တော့ ထိတွေ့မှု နည်းပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါး မှာ Data Journalism ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ ဆိုတာ မိတ်ဆက်ပေးသွားမှာပါ ။ Data Journalism ဆိုတာ ဘာလဲ? ဒေတာအချက်အလက်တွေနဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့ Read more…
BBC Micro:Bit မိတ်ဆက်
BBC micro:bit ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကတော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ နဲ့ စိမ်းနေပါသေးတယ် ။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံတကာမှာတော့ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုနေတဲ့ အရာတစ်ခု ဖြစ်ပြီး ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္မဏီကလဲ ကျွန်တော်တို့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးသား မီဒီယာကုမ္မဏီကြီးတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ BBC ပါ။ BBC micro:bit ဆိုတာ ဘာလဲ ? BBC micro:bit ဆိုတာ အိတ်ကပ်အရွယ်အစားလောက်ပဲ ရှိတဲ့ ကွန်ပျူတာ သေးသေးလေးတမျိုးပါ။ Read more…